1) Tsy tokony hividy fitafiana miloko mena na mainty. Ireo loko ireo dia tena tian’ny devoly fatratra. Ohatra amin’izany: fampiasa eny amin’ny toerana fanompoan-tsampy ny loko mena: akoholahy mena, salaka mena, valamena, fehiloha mena…Tahaka izany koa ny loko mainty: lokon’ny aizina na alina, izay anjakan’ny asan’ny maizina, lokon’ny akanjo fisaonana…
2) Fadio ihany koa ny mividy kanjo misy sarina biby, toy ny alika,saka,liona, dragona. Toy izany ihany koa, zava-doza ihany koa ny akanjo misy ireo marika na famantarana satanika, toy ny telozoro (illuminati), ny sary kintana (fiangonana satanika). Misy ihany koa ireo soratra na famantarana izay tsy fantatra ny dikany na ny heviny, amin’ny tenim-pirenena vahiny: frantsay, anglisy, sinoa…Tsy dia tsara ihany koa ny manao akanjo misy sarin’olona: mpanao politika, olo-malaza amin’ny sarimihetsika, fanatanjaha-tena, mpihira…Ny fanaovana ireny akanjo ireny, dia tsy hafa fa fitondrana fitaovana misintona an’I Satana sy ny miaramilany, hiditra ao amin’ny tena ny tokantrano izay misy antsika. Tsy hafa izany ireny fa tahaka ny “antenne” misarika ny asan’I Satana, ka tandremo!
3) Misy ihany koa ireo akanjo na fitaovan’ny maty, amidy eny an-tsena, toy ny akanjo, na fitafiana, na kirao, satroka, fehikibo…Na izy ireny tonta, toy ny friperie, na vaovao ihany koa. Mora fantatra izy ireny, raha feno vavaka tsara isika. Raha vao raisina izy ireny, dia mangirintsina ny tanana, na mijorona ny hodi-doha, raha vao mikasika ny hoditra ihany koa na anaovana ny akanjon’ny maty, na misy ody, dia marary ny faritra izay misy azy. Raha mividy akanjo tonta isika ohatra, na vaovao ihany koa, ka maty ilay tompony avy eo, dia tsy maha-tsara antsika ny manao izany akanjo izany. Ny antony: manaraka antsika ny fanahin’ny fahafatesana, dia ny devoly izay manararaotra, sy misandoka ny fanahin’ilay maty, mampitahotra sy mampahory antsika. Miteraka nofy ratsy ihany koa ny fanaovana an’ireny akanjo na fitaovan’ny maty ireny: manonofy miaraka amin’ireo olona efa nodimandry: miara-matory…
Noho izany, ny akanjo sy fitaovan’ny maty, rehefa nodimandry ny tompony, dia tsy azo anaovana na tehirizina na oviana na oviana, fa na ampanarahana azy any am-pasana, na dorana. Tsy tokony hanaovana, na omena olona. Tsy vitan’ny hoe misarika ilay devolin’ny fahafatesana hampahory ny velona ihany ireo fitaovana ireo, fa miteraka ozon’ny fahafatesana ihany koa amin’ny taranaka fara-mandimby. Ankoatr’izany, misarika aretina sy tsy fahombiazana amin’ny lafiny rehetra ho an’ny ankohonana sy fianakaviana ihany koa.
4) Tsy tokony hividy fitafiana rovitra na mitampina ihany koa, na misy tasy. Ireny dia mitarika zava-dratsy ihany koa ho an’ny vatana: aretina, loza, tsy fahombiazana. Raha tsy mivavaka mafy isika, ary raha tsy mandroaka ny devoly amin’ny anaran’I Jesosy, mandevona izany amin’ny Ran’I Jesosy Kristy, dia mety hifindra amintsika ny devolin’ilay olona tompon’ilay akanjo, na ny tompon’ny orinasa mpanambotra ilay akanjo, raha olon’ny asan’ny maizina izy ireny. Tokony hahiratra ny mason’ny kritiana manoloana ny asa maloton’I Satana amin’izao andro farany izao. Mahavariana ny fihazakazahan’ny tanora mividy ireny akanjo rovitra ireny, toy ny “jean” ohatra, izay zary lasa lamaody. Ringana ny tanora, nohon’ny tsy fahalalàna, koa adidintsika izay mamaky izay fampianarana izao ny manaparitaka izany, fa zava-doza ny asan’I Sataana amin’izao fotoana izao. Mitady hirehareha ny andrianan’izao tontolo izao, dia Losifera izany, koa mila miady mafy isika, ary mila manana fahatokiana fa tsy maintsy handresy.
5) Alohan’ny anoharana ny akanjo izay hovidiana, dia mivavaka mafy mba horakofan’ny Ran’I Jesosy ilay fitafiana na fitaovana, alohan’ny anatsofohana azy amin’ny vatana. Raha tsy manao izany isika, dia azo antoka fa mora amin’I Satana ny hanararaotra ilay zavatra anaovantsika, mba hifikirana amintsika, hahatonga aretina sy loza isan-karazany.
6) Tsy tokony hanao fitafian’ny lahy ny vavy, ny vavy ihany koa tsy hanao fitafian’ny lahy, araka ny Deo 22: 5 “Aoka ny vehivavy tsy hitafy ny fitafian-dehilahy; ary aoka ny lehilahy tsy hitafy ny fitafiam-behivavy; fa fahavetavetana eo imason'i Jehovah Andriamanitrao izay rehetra manao izany”. Tsy mahazo mamadika na oviana na oviana ny lamina sy ny lalànan’ny fahariana nataon’Andriamanitra isika. Tsy ny rafi-batana ihany, fa tokony ho hita taratar amin’ny fitafiana izay anaovana ny fanarahantsika ny
7) Alohan’ny handefasana ny akanjo any amin’ny mpanasa lambantsika, na any amin’ny toerana fanasana toy ny “teinturerie”, dia rakofy ny Ran’I Jesosy aloha ny lamba na ny akanjo. Ny antony, tsy fantatsika ny fahadiovana na ny fahamasinan’ny olona izay miandraikitra izany fanadiovana na fanasana ny akanjo izany. Rehefa tonga indray ireny lamba ireny dia rakofy ihany koa ny Ran’I Jesosy, alohan’ny hanaovana azy.
8) Tsy azo atao ny mifampindrana akanjo na fitaovana ilaina amin’ny vatana, toy ny fihogo, fiharatra…Na amin’ny fahasalaman’ny vatana fotsiny aza, dia ilana fitandremana, mainka ihany koa amin’ny asan’ny devoly maro samihafa. Raha avy mandevina na avy namadika ohatra ny olona anankiray, izany hoe nifanerasera tamin’ny faty, kanefa ianao nindrana ny akanjo nanaovany, dia mazava ho azy, fa tsy maintsy hanaloka antsika ny fanahin’ny maty, ny fanahin’ny fahafatesana. Raha avy nijangajanga ohatra ny namanao, nefa ianao nindrana ihany koa ny akanjo na ny fitaovana nanaovany, dia hifindra mora foana ihany koa ny devolin’ny fijangajangana, ary zava-doza tokoa izany.
10) Roahina devoly sy rakofana ny Ran’I Jesosy alohan’ny hanaovana azy ny fitafiana sy ny fitaovana anaovantsika, isaky ny hanao izany. Tsy tokony ho maika hanao ny akanjo isika, na maika tahaka ny inona aza, indrindra ho an’ny zazakely sy ny ankizy, izay mbola tsy mahalala na inona na inona. Tsarovy fa ny devoly dia manararaotra ny tsy fahalalana sy ny mbola fahakelezan’ny finoana, hifikirana aminy. Lasibatra amin’ny asan’ny devoly ny zaza menavava, ny ankizy, eny hatramin’ny zaza any am-bohoka aza, satria tsy manana finoana ho entina mijoro sy manohitra ny asan’ny
11) Tsy maintsy sasana amin’ny anaran’I Jesosy sy ny Ran’I Jesosy Kristy ny akanjo na ny fitaovana nentina tany amin’ny faty, toy ny fiara na ny moto, ny bisikileta…Mloto amim-paty avokoa ireny zavatra ireny, ary raha ny marina, tsy tokony mbola hampidirina ao an-trano, raha tsy voadio amin’ny anaran’I Jesosy. Isika koa dia tsy maintsy mandro amin’ny anaran’I Jesosy!
12) Fadio ny mitondra akanjo sy fitafiana tsy maotina: akanjo fohy, manify, mitanjaka, mampiseho tratra na lamosina, fe kibo…Fantaro fa sady mamandrika ny tenatsika isika, no mamandrika ny hafa ihany koa amin’ny fijangajangana raha manao izany.